गुल्मी, पाल्पा, रुपन्देहीमा सहित आज थपिएका १२२१ जना संक्रमित मध्ये कुन जिल्लामा कति?
> गुल्मी, पाल्पा, रुपन्देहीमा सहित आज थपिएका १२२१ जना संक्रमित मध्ये कुन जिल्लामा कति?
१४ भाद्र २०७७, आईतवार १७:५०
काठमाडौं, १४ भदौ । आज थप १ हजार २ सय २१ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्‍वर गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १२२१ संक्रमित थपिएका हुन् । जसमा ३४८ महिला र ८७३ पुरुष रहेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्‍न अस्पतालबाट २६७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । त्यसैगरी हालसम्म २० हजार ८२२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म डिस्चार्ज हुने दर ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
आजसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १७ हजार ५१८ रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका ३९ प्रयोगशालाबाट १२ हजार ७१७ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । हालसम्म जम्मा ६ लाख ८२ हजार ३४३ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
देशभरका संस्थागत आइसोलेसन १० हजार ६१२ जना र होम आइसोलेसनमा ६ हजार ९०६ रहेका छन् । आजसम्म देशभर ७ हजार ७९७ जना क्‍वारेन्टिनमा रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका ३७२, ललितपुरका १२, भक्तपुरका ४५, इलामका १, ओखलढुङ्गाका ४, झापाका ११, पाँचथरका १, मोरङका ४९, संखुवासभाका २, सुनसरीका ३३, धनुषाका ७५, पर्साका ४६, बाराका ८२, महोत्तरीका ३७, सप्तरीका ६, सर्लाहीका ३४, सिरहाका २६, काभ्रेका २५, चितवनका ९०, धादिङका ३, मकवानपुरका ९, रामेछापका १, सिन्धुपाल्चोकका २, सिन्धुलीका ५ र कास्कीका ५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
यस्तै गोरखाका ५, तनहुँका ४, नवलपरासीका २, बाग्लुङका ३, अर्घाखाँचीका ३, कपिलवस्तुका २५, गुल्मीका ६, दाङका ५, नवलपरासीका २१, पाल्पाका ८, प्यूठानका ५, बर्दियाका ६, बाँकेका १४, रुपन्देहीका ६१, अछामका ८, कञ्चनपुरका १, कैलालीका ६, डोटीका ११, दार्चुलाका २ तथा बझाङका ४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।